प्रधानमन्त्रीमा दक्षता छ, सल्लाहकार ठिक भएनन् – हाम्रो देश
प्रदीप गिरि, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा चीन अर्थात् बेइजिङमा, क्यानबेरा अर्थात् अष्ट्रेलियामा र अन्य विभिन्न ठाउँमा बन्दै गरेका भवनहरुका लागि लाखौं रकम छुट्याइएको छ।
सबैभन्दा पहिला तीनवटा कुरा छन्। बेइजिङको राजदूतावासको निर्माण, क्यानबेराको राजदूतावासको निर्माण, यहीँ काठमाडौंमै केही भवनहरुको निर्माण छ। र, अन्त्यमा छ- विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कठिनाई परेमा भित्र्याउनका लागि सहयोग। सहयोग पनि फिर्ता ल्याउनलाई। उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन अप्ठ्यारो परेको मुद्धामा वकालत गरिदिनलाई जम्मा एक सय १८ लाख। ती श्रमिक, जसको आँसु र पसिनामा आएको पैसामा हामी समेत तलब भत्ता खादैछौं।कोरोनाको यस्तो मुस्किलमा पनि उनीहरुका लागि एकसय लाख!
भवन पर्खिन सक्छ। क्यानबेरा पनि एउटा महत्वपूर्ण केन्द्र भएर गएको छ। तर क्यानबेरा र बेइजिङको भवनको निर्माण अथवा यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माणको तुलना अहिले विदेशिन बाध्य भएका, मजबुरीमा परेका, घर आउन छट्पटिरहेका मान्छेहरुको खर्चसँग तुलना गर्न सकिँदैन। मैले यस कारण तुलना गर्नुपरेको छ कि सिंगो सरकारको कुन विचारधाराले हामी हिँडिरहेका छौं।
सवाल दुइटा राजदूतावासको मात्रै होइन, बाहिर कति छन्? तीस वटा हाम्रा राजदूतावास छन्। कतिपय नियोग छन्। ३० वटा राजदूतावास आज कुन मापदण्डका आधारमा चलिरहेका छन्? परराष्ट्र नीतिको कुन समझदारीका आधारमा चलिरहेका छन्? बेलायतको त्यो भव्य राजदूतावास किन छ? राणाकालमा किनिएको त्यो भवन अहिले पनि छ।
सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई सोध्न चाहान्छु- विदेशका ती नियोगमा हामी कति व्यापार गर्छौं? कति नोक्सान छ? मलाई थाहा छ, परराष्ट्र नीतिको बारेमा हाम्रो देश चलाउने व्यक्तिलाई एकदमै कम चासो छ। कम जानकारी छ। आरोप लगाउन चाहान्छु।
परराष्ट्रमा नियोग चलाउँदाखेरी हामीले भूगोललाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो मुलुकलाई काम लाग्ने देश, कसैले मन पराए पनि नपराए पनि, हिन्दुस्तान, चीन र त्यसपछि छ भने अमेरिका हो। बाँकी मुलुकसँग हामीले कुनै समय राजालाई हरेक सहरपिच्छे दरबार चाहिएजस्तै अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्न राजदूत राख्ने काम छैन। सानो ब्रसेल्सले सिंगो युरोप चलाउन सक्छ। त्यो खर्च कटौती गर्नुहोस्। विदेश नीतिमा आइरहेका समस्या एमएमसिसीको विवाद छ। रोड एण्ड बेल्ट इनिसियटिभको बारेमा हामीले राय बनाउनु परेको छ।